حياتك الجديدة2| New Muslim Guide
Home › तपाईंको नयाँ जीवन › حياتك الجديدة 2
प्रभावकारी आह्वानका गुणहरु-
अल्लाहको बाटोतिर आह्वानको महत्व-
अल्लाहले प्रभावकारी आह्वानका केही शर्तहरु बयान गर्नु भएको छ, तीमध्ये केही निम्न लिखित छन्…
१) विवेक र परिज्ञान-
मार्गदर्शकले जुन कुराको आह्वान गरिरहेको छ त्यसको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ र कोसँग कस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “भनिदेऊ, मेरो मार्ग यही हो। म र मेरा अनुयायीहरु पूर्ण ज्ञान र चेतनशीलताका साथ अल्लाहतर्फ आह्वान गर्दछौं।” (श्रोत- सूरह यूसुफ : १२/१०८) अल्लाहले रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लाई सम्बोधन गरेर हामीलाई पाठ सिकाउनु भएको छ कि पूर्ण ज्ञान र चेतनशीलताका साथ नै इस्लामको आह्वान गर्नु पर्छ।
ज्ञानको अर्थ यो पनि होइन कि सिङ्गो इस्लाम नसिकुन्जेल इस्लामतिर आह्वान गर्नु हुँदैन। बरु तपाईसँग जति ज्ञान छ, यहाँसम्म कि कुरआनको एक आयतको पनि ज्ञान छ भने त्यसको आह्वान गर्नु पर्छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “इस्लामको तब्लीग (प्रचार-प्रसार) गर, चाहे इस्लामको एउटा कुरा किन नहोस्।” (श्रोत- बुखारी : ३२७४)
यसरी सहाबीहरु इस्लाम ल्याउने गर्थे अनि थोरै दिनहरुमा इस्लामका आधारभूत कुराहरु सिकेर आफ्नो समुदायमा फर्केर मानिसहरुलाई इस्लामतिर आह्वान गर्थे र इस्लाम आत्मसात गर्न प्रेरित गर्दथे। उनीहरुको असल आचरण र मिठो बोलीले मानिसहरु प्रभावित भएर लुरु-लुरु इस्लामलाई आत्मसात गर्थे।
२­) बुद्धि र प्रभावकारी उपदेश-
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे सन्देष्टा, अल्लाहको मार्गतिर बुद्धि र प्रभावकारी उपदेशद्वारा आह्वान गर र उनीहरुसँग राम्रो तरिकाले तर्क वितर्क गर।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/१२५) अर्थात बुद्धि पुर्याएर स्थिति र स्थान अनुसार इस्लामतिर आह्वान गर्नु पर्दछ।
मानिसहरुको बिचार, सोच्ने र बुझ्ने शक्ति अलग-अलग हुन्छ। मार्गदर्शकले मौका अनुसार उपयुक्त साधन अपनाउनु पर्छ र समयको सदुपयोग उसको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ।
निमन्त्रित व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी उपदेश दिनुका साथै नम्र व्यवहार, शान्त वातावरणमा तर्क वितर्क, उनीहरुको चित्त नदुखाइकन र रिसलाई उत्तेजित नगरिकन इस्लामतिर आह्वान गर्नु पर्छ। अल्लाहको यसै वरदानले गर्दा रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मानिसहरुका साथ अत्यन्त विनम्र हुनुहुन्थ्यो। यदि कठोर र निर्दयी भएको भए मानिसहरु उहाँदेखि टाढा हुन्थे। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे मुहम्मद ! तिमीले अल्लाहको अपार कृपाले नै उनीहरूप्रति उदार गरेका छौ। यदि तिमी क्रुर एवम् कठोर हृदयी भएको भए यिनीहरू तिम्रो वरिपरिबाट तितर-बितर हुने थिए।” (श्रोत- सूरह आलि-इमरान : ३/१५९)
अल्लाहले जसलाई इस्लाममा प्रवेश गर्न सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नु भएको छ, उसले आफ्नो घरपरिवार तथा नातेदारहरुलाई इस्लामतिर आह्वानतिर गर्नु पर्छ, किनभने उनीहरु उसका नजिक र प्यारा व्यक्तिहरु हुन्। आह्वानको क्रममा उनीहरुबाट पाएको कष्टमाथि धैर्य गर्दै चाहिने सबै साधनहरुलाई समय र स्थान अनुसार बुद्धि पुर्याएर प्रयोग गर्नु पर्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “आफ्नो घरपरिवारलाई सलाहको आदेश देऊ र त्यसमा अडिग होऊ।” (श्रोत- सूरह ताहा : २०/१३२)
कतिपय मार्गदर्शकहरुको आह्वानले आफन्तहरु इस्लाम स्वीकार गर्दैनन्, तर टाढाका व्यक्तिहरु स्वीकार गर्छन् जसले गर्दा ऊ निराश हुन्छ, तर प्रभावकारी मार्गदर्शक त्यो हो, जो सम्पूर्ण सामग्रीहरुलाई प्रयोगमा ल्याएर नयाँ-नयाँ तरिका अपनाएर उनीहरुको पथप्रदर्शनको लागि प्रयासरत हुन्छ, उनीहरुको मार्गदर्शनको लागि अल्लाहसित प्रार्थना गर्छ र कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि हरेस खाँदैन।
जसरी रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले आफ्नो काका अबु-तालिबलाई इस्लामतिर आह्वान गर्दा हरेस खानु भएन। जसले उहाँको मद्दत गर्नु हुन्थ्यो र कुरेशको सामु हरेक जटिल परिस्थितिमा सघाउनु हुन्थ्यो, तर इस्लाम ल्याउनु भएन। के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले हार मान्नु भयो ? किन हार मान्नु ? उहाँ काकाको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म प्रयासरत रहनु भयो । उहाँले भन्नु भयो… “ए काका, एक चोटि (ला इलाहा इलल्लाह) भनि दिनुस् म तपाईको लागि यसलाई प्रमाण बनाउँछु।” (श्रोत- बुखारी : ३६७१, मुस्लिम : २४) तर उहाँले भतिजाको आह्वानलाई स्वीकार गर्नु भएन र कुफ्रको अवस्थामा नै मर्नु भयो। त्यसपछि अल्लाहले यो श्लोक अवतरण गर्नु भयो… “हे मुहम्मद ! तिमीले जसलाई माया गर्छौ त्यसलाई सत्य मार्गमा डोर्याउन सक्दैनौ। तर अल्लाहले जसलाई चाहनुहुन्छ, सत्य मार्गमा डोर्याउनु हुन्छ। उहाँ सत्य मार्ग ग्रहण गर्नेहरुलाई राम्ररी चिन्नु हुन्छ।” (श्रोत- सूरह अल्-कसस : २८/५६) ताकि मार्गदर्शकले इस्लामको आह्वानमा बुद्धि पुर्याएर सकेसम्म प्रयास गर्नु पर्छ। तर मुटुको ताल्चा अल्लाहको हातमा हुन्छ, जसलाई चाहनुहुन्छ, सत्य मार्गमा डोर्याउनु हुन्छ।